Izinsizakalo zethu-Abakhiqizi be-apicmo biochemical cdmo
I-APICMO inkampani yezokwelapha ekhethekile kuma-intermediate abalulekile ekucwaningeni okusha nokuthuthukiswa kwe-oncology.
Sinikeza ukuthuthukiswa kwesistimu kanye nokwenza ngokwezifiso.
ukukhiqizwa kweminye kanye nezinye izinsiza zokucwaninga izidakamizwa kanye nezikhungo zokuthuthukiswa kanye nezinkampani zokwelapha
I-APICMO ye-Drug Discovery iyisisombululo esisefu-nesisombululo sokucubungula esihlaziya ulwazi lwesayensi nolwazi ukuze kudalulwe ukuxhumana okuyaziwayo nokufihliwe okungasiza ekwandiseni amathuba okuphumelela kwesayensi.
Kule minyaka eyishumi edlule, i-APICMO ibihlinzeke ngezinsizakalo ezenziwe ngokujwayelekile zenkambiso kanye nezinsizakalo zokukhiqiza. Izinga lethu lensizakalo lingaba lisuka ku-milligram's batch encane kuya kwamathani ezinsizakalo ezinkulu zokukhiqiza.